Teleskaopy habakabaka tarihin'i UK hamantatra izay anaovana exoplanets - Micro-Semiconductor.com
Salama vahiny! Micro-Semiconductor.com
Fidio ny firenena na faritra.
Teleskaopy habakabaka tarihin'i UK hamantatra izay anaovana exoplanets
Izy io dia antsoina hoe Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey, na Ariel.
Taorian'ny famatsiam-bolan'ny governemanta, ny andrim-pikarohana any UK - ao anatin'izany ny UCL, ny RAL Space, ny sampandraharaha misahana ny haitao ary ny ivon-toerana teknolojia UK, University of Cardiff ary ny oniversiten'i Oxford, dia manana andraikitra lehibe amin'ny iraka.
Ny tanjon'i Ariel dia ny mahatakatra ny fifandraisana misy eo amin'ny simia misy ny planeta sy ny tontolony amin'ny alàlan'ny fanaovana planeta planeta 1 000 fantatra ivelan'ny Solar System antsika manokana. Manantena ny UK Space Agency (UKSA) fa hanome ny mpahay siansa sary mazava kokoa momba ny fanaovana ny exoplanets, ny fomba namoronana azy ary ny fivoarany.
Ohatra, Ariel dia mety afaka mamantatra ireo fambara misy akora fanta-daza ao amin'ny atmosfera misy ny planeta toy ny etona rano, dioksidan'ny karbaona sy ny metana. Ho hitany ihany koa ireo fitambarana metaly hamaritana ny tontolo simika ankapobeny amin'ny rafi-masoandro lavitra.
Ho an'ny planeta maromaro voafantina, hoy ny UKSA, Ariel koa dia hanao fanadihadiana lalina momba ny rafitra rahona ary hianatra ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny tontolo iainana isan'andro.
"Izahay no taranaka voalohany afaka mianatra planeta manodidina ny kintana hafa," hoy ny Profesora Giovanna Tinetti, Mpanadihady Principal an'i Ariel avy amin'ny University College London. “Hanararaotra an'io fotoana tsy manam-paharoa io i Ariel ary hanambara ny natiora sy ny tantaran'ireo tontolo an-jatony maro ao amin'ny vahindanitra misy antsika. Afaka manomboka amin'ny dingana manaraka amin'ny asantsika isika mba hahatanteraka ity iraka ity. ”
Indray mandeha amin'ny orbit, Ariel dia hizara ny angon-drakitra amin'ny besinimaro.
Ity sary etsy ambony ity dia ohatra spectrum iray izay azon'i Ariel refesina amin'ny hazavana mamaky ny atmosfera exoplanet.
Ariel dia nandalo dingam-pandinihana nandritra ny taona 2020 ary natokana hanombohana amin'ny 2029.
"Noho ny famatsiam-bolan'ny governemanta, ity iraka tarihin'i UK be zotom-po ity dia hanamarika ny fandalinana lehibe voalohany ny planeta ivelan'ny Solar System, ary hahafahan'ireo siantifika manam-pahaizana momba ny habakabaka hamaly ireo fanontaniana manakiana ny famoronana sy ny fivoarany," hoy ny minisitry ny siansa, Amanda Solloway.
"Manaporofo ny asa mamirapiratra avy amin'ny indostrian'ny habakabaka UK, ireo mpahay siansa sy mpikaroka mahatalanjona tarihin'i University College London sy RAL Space ary ireo mpiara-miombon'antoka amintsika iraisam-pirenena fa 'miala' ity iraka ity. Manantena aho ny hijerena ny fandrosoany mankany amin'ny fandefasana amin'ny 2029. ”
Tontolo 4.374 sasany no nohamafisina tao amin'ny rafitra 3,234 hatramin'ny nahitana ny exoplanet voalohany tamin'ny voalohan'ny taona 1990, hoy ny UKSA.
Sary: ESA / STFC RAL Space / UCL / UK Space Agency / ATG Medialab
2: 1 MIPI switch ho an'ny data 2x + famantaranandro 1x D-PHY, na 2x C-PHY
Antsoina hoe PI3WVR628, izy dia switch enina andry tokana, tsipy indroa (SPDT) manohana zana-data ro...
UK nanao: mpampitohy pitch 60A 8.5mm
"Midika izany fa ny rindranasa toy ny famahana bateria dia azo alamina nefa tsy mila mizara ny ankeh...
RAF Space Command hapetraka, fandefasana any Ekosy
Ny praiminisitra dia nanambara ny fandaniany vola mitentina 24,1 tapitrisa pounds, ao anatin'ny 4 ta...
HV DC amin'ny tanety, rivotra ary ranomasina
Ny mpamatsy herinaratra 3kW avo lenta (HV) DC dia manolotra fidirana 90 ka hatramin'ny 264Vac ary sa...
300mA LDO ambany feo dia 1 x 1mm
Misy vokatra 32 ao amin'ny andiany TCR3RM, satria ho fantatra izany, miaraka amina famoahana tokana ...
Makà singa elektronika avo lenta amin'ny vidiny ambany kokoa avy amin'ny Micro-Semiconductor.com
* Azafady fenoy eto ambany ny takelaka fangatahana
Adiresy: Unit 13 14F Lippo Sun Plaza 28 Canton Road Tsim Sha Tsui, KLN, Hong Kong
Copyright © 2020 Distributor azo itokisana ny singa elektronika info@Micro-Semiconductors.hk